निश्चित गर्नुहोस् हाइफनेसन पाठ कागजातहरूका लागि विकल्प.
स्वचालित रूपमा योजकहरू घुसाउनुहोस् जहाँ तिनीहरू अनुच्छेदमा आवश्यक पर्दछ.
रेखा अन्त्यमा क्यारेक्टरहरू
रेखा सुरुमा क्यारेक्टरहरू
अधिकतम सङ्ख्या कन्सिक्युटिभ योजक चिन्हहरूको
कन्सिक्युटिभ रेखाहरूको अधिकतम सङ्ख्या प्रविष्ट गराउनुहोस् जुन योजक हुन सक्छ.
पृष्ठ वा स्तम्भ बिच्छेद विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.
यो जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्, र बिच्छेद प्रकार चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
तपाईँंले घुसाउन चाहनु भएको बिच्छेद प्रकार चयन गर्नुहोस्.
चयन गर्नुहोस् जहाँ तपाईँं बिच्छेद घुसाउन चाहनुहुन्छ.
पृष्ठ शैली सँग
जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्, र पृष्ठ शैली चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं बिच्छेद पछि पहिलो पृष्ठलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो.
बिच्छेद पछि पहिलो पृष्ठका लागि प्रयोग गर्न ढाँचा शैली चयन गर्नुहोस्.
पृष्ठ बिच्छेद भन्दा अगाडि र पछाडि देखिने अनुच्छेदहरूका लागि पाठ प्रवाह विकल्प निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
अनुच्छेद स्प्लिट नगर्नुहोस्
बिच्छेद घुसाइए पछि अर्को पृष्ठ वा स्तम्भमा पूर्ण अनुच्छेद बदल्नुहोस्.
पछिल्लो अनुच्छेद सँग राख्नुहोस्